China Floor pad orinasa sy mpanamboatra | Jinqiu
Ny pads amin'ny gorodona samy hafa dia samy manana ny fampiasana azy, ary tsy ny pad rehetra no tokony ampiasaina amin'ny karazan-gorodona rehetra. Ankehitriny avelao aho hampahafantatra anao amin'ny antsipiriany mba hahitanao ny pads mety indrindra.
Nylon / fitaovana polester.
25mm ampy hateviny.
Fampiasana fotsy amin'ny famolahana ny gorodona voaaro.
Fampiasana mena hanadiovana tsifotra mahazatra amin'ny gorodona arovana.
Fampiasa mainty ho an'ny fanadiovana lalina, ary gorodona vato amin'ny indostrialy.
Size 17 " 20 "
fonosana 5pcs / ctn 5pcs / ctn
Haben'ny fonosana 440x130x440mm 515x130x515mm
Lanja tsy afa-karatsaka 1kg fotsy, 1.1kg mena, mainty1.6kg 1.6kg fotsy, 1.7kg mena, mainty2,3kg
Ny lokon'ny gorodona mena dia natao ho an'ny famonoana gorodona izay afaka manala ny marika maivana sy ny loto ary hampamirapiratra ny gorodona sy hamaranana. Izy io dia mety tsara amin'ny fampiasana adidy maivana satria tsy hanimba ny gorodonao izy ireo. Izy ireo koa dia mety amin'ny asa fanadiovana isan'andro sy ho an'ny milina fanosotra haingam-pandeha. Ny paoma mena dia fantatra ho mahery setra indrindra ary azo ampiasaina amin'ny buffing maina na spray.
Ny loko fotsy dia natao ho an'ny polishing pad izay malefaka indrindra amin'ny gorodona, mifanentana amin'ny lahasa isan'andro. Mampiasà lamba poloney fotsy miaraka amina poleta amin'ny gorodona haingam-pandeha sy zavona rano manify, afaka manja sy mamirapiratra ny gorodonao. Ny pads dia tokony hampiasaina amin'ny gorodona maina sy madio hanampiana savoka malefaka amin'ny famaranana. Ny fonosana fotsy dia tsy haharitra amin'ny endrika mihantona ary tsy mety amin'ny milina haingam-pandeha.
Pads gorodoko miloko mainty izay loko miendrika lamba manendaka, afaka manafoana tanteraka ny famaranana, ny famehezana, ny savoka ary ny loto ianao mba hahafahanao manamboatra ny gorodonao. Masiaka be izy ireo ary mampijaly ary tokony hampiasaina amin'ny milina haingam-pandeha.
Amin'ny alàlan'ny fampidirana ny loko sy ny asan'ny pad pad, dia hanana fahatakarana vaovao momba ny safidin'ny pads isika, mino aho fa afaka misafidy ny entana mety ho an'ny gorodonao ianao. Raha tsy mahafeno ny filanao gorodona ireo, azafady mifandraisa aminay, azonay atao ny manamboatra arakaraka ny zavatra takinao.
Previous: Pad polishing malefaka
Manaraka: Volon'ondry vy
Pad polishing malefaka